Madaxweyne Mustafe Oo Xilka Laga Qaado, Faa'iido Iyo Khasaare Midkee DDS Kasoo Gaadhi Doona? - Jigjiga Online
HomeSomalidaMadaxweyne Mustafe Oo Xilka Laga Qaado, Faa’iido Iyo Khasaare Midkee DDS Kasoo Gaadhi Doona?
Siyaasiyiinta iyo dadka kale ee la socda xaaladda siyaasaddeed ee Itoobiya, waxay saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey ku qarqiyeen shacabka Soomaalida warbixino badan oo ay ku sheegayeen in xilka laga qaaday amaba uu ku dhow yahay in laga qaado, Madaxweyne Mustafe Muxumed Cumar.
Xogaha laga helayey Addis Ababa, waxay sheegayaan in Madaxweyne Mustafe uu daqiiqadihii ugu dambeeyey kasoo horjeedsaday xisbiga qaran ee Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed u rogay isbahaysigii EPRDF.
Sida tibaaxuhu tilmaamayeenna, waxa Mustafe uu u dhoofay waddanka Kenya oo uu kusoo qaatay nasasho kooban, laakiin shalay ayuu dib ugu laabtay Addis Ababa xilli si rasmi ah xisbigii EPRDF loogu beddelay PP oo xisbiga Dimuquraadiga Soomada (SDP) uu uga mid noqday.
Madaxweynaha iyo masuuliyiinta sare ee deegaanku kamay hadal walaaca shacabka Soomaaliyeed ka qabeen xisbiga cusub ee PP marka laga reebo Eng. Maxamed Shaale oo ah madaxa xarunta dhexe ee SDP oo sheegay in aanay awood u lahayn in masiirka Soomaalida ay geeyaan Addis Ababa ama go’aan ay iyagu kalidood ka gaadhaan, laakiin waxa uu tilmaamay in ay shuruudo ku xidheen xisbiga cusub ee loo guuray, taas oo war-saxaafadeed shalay uu soo saaray EPRDF/PP uu ku sheegay in qowmiyadaha soo kobcaya ay shuruud la’aan axsaabta hoggaamisaa uga mid noqdeen.
Haddaba, macluumaadka ay siyaasiyiintu soo gudbinayaan ee sheegaya in Madaxweyne Mustafe la beddelay amaba la beddelayo, maxay uga dhigan tahay DDS, maxaa se faa’iido ah oo laga helayaa Mustafe oo xilka waaya?
Mustafe Muxumed Cumar waxa uu xilka Dawladda Deegaanka qabtay bishii August ee sannadkii hore ee 2018, waxaana muddadaas hana-qaaday furfurnaan siyaasadeed, dhaqdhaqaaq, warbaahineed iyo ganacsiba, waxaana si toos ah fagaareyaasha iyo goleyaasha siyaasadeed uu ugala doodayey cid kasta oo saluug ka muujisa qaabka uu wax u maamulayo.
Siyaasiyiin badan oo markii hore ay isku-dhawaayeen ayay is-jiidheen muddadaas, waxaana ay muddooyinkii dambe kala hor yimaaddeen mucaaradad adag iyo eedaymo culus oo ay ugu jeedinayeen in maamulkiisa uu ragaadiyey musuqmaasuq baahsan oo xidhiidhsan madaxtooyada illaa xafiisyada ugu hooseeya. Eedaha noocan ah, marna mucaaradku may keenin caddaymo ay u hayaan, laakiin waxay soo-qaataan hadal-haynta suuqaba hore u taallay ee aan daliilka cad wadanin.
Madaxweyne Mustafe ayaa isaguna meelo badan ka qiray in musuq uu jiro laakiin uu kula jiro dagaal, isagoo dhinaca kalena mucaaradka iyo cid kasta ka dalbaday inay soo bandhigaan caddaymaha ay hayaan si uu xadhkaha ugu siibo cidda musuqa gashay.
Marka laga yimaaddo eedaymaha musuqa iyo xilalka qaabka qabiilaysan lagu bixiyo, mucaaradku waxa kaliya oo ay ku doodaan in Mustafe uu ka leexday jidhkii ay ahayd in lagu socdo, halgankii lasoo galayna uu jiho qaldan u dhaqaajiyey.
Waxa kale oo ay siyaasiyiintan qaarkood ay ku andacoodeen in Madaxweynuhu ka baxay ballamo ay hore u wada-galeen oo ay ka mid ahaayeen inay qayb ku lahaadaan talada iyo nidaamka xukuumadda iyagoo xattaa dibedda ka jooga, taas oo u dhadhamaysa inay doonayeen in kursiga uu Mustafe ku fadhiyo laakiin ay iyagu talooyinka daaha-dabadiisa ka go’aamiyaan, Madaxweynuhuna ahaado magac u yaal kaliya.
Haddii ay dhacdo, in xukunka uu wareejiyo Madaxweyne Mustafe oo ah nin afgaaban, goleyaaashana la yimaadda dood iyo Soomaalinimo, odayaashana taladooda qaata oo mar walba garbihiisa taagan yihiin, ma jirayso dheef dheeraad ah oo usoo hoyanaysa deegaanka, waxaana suurtogal ah in lasoo magacaabo madaxweyne kale oo aan aqoon, caqliyad iyo fikir ahaan midna gaadhsiisnayn halka uu taagan yahay Madaxweyne Mustafe.
Waxa kale oo suurtogal ah, in uu xukunka yimaaddo, Madaxweyne mucangag ah oo sidii Cabdi Iley u dhaqma, sidoo kalena cagta mariya siyaasiyiinta, odayaasha iyo cid kasta oo ka hor timaadda nidaamkiisa maamul.
Labadan beddelkooda, waxa iyaduna dhici karta in Madaxtooyada DDS uu yimaaddo Madaxweyne aqoon, caqli iyo waayo aragnimo maamulba leh oo garbihiisa ku qaada shacabka abaaraha, aqoon la’aanta, biyo la’aanta iyo dagaalladu ka dhigeen kuwo duruufo nololeed oo adag ay ku gedaaman yihiin.
Si kastaba ha ahaatee, mar haddii doorasho xor ah aaanay shacabku kusoo xulanaynin madaxweynahooda, marnaba bulshada Soomaaliyeed ee DDS masoo go’aaminayaan ninka beddelaya Madaxweyne Mustafe, waxaana si toos ah usoo magacaaban doona Ra’iisal Wasaaraha oo xulan doona qof uu aaminsan yahay inuu fulin doono danihiisa iyo aragtidiisa siyaasadeed, deegaankana uu gacantiisa hoos geyn doono, taasina maaha mid ay waqtigan dani ugu jirto, waxaana habboon inay garab istaagaan Mustafe inta ka horreysa doorashooyinka sannadkan gudihiisa la filayo inay guud ahaan Itoobiya ka qabsoomaan, markaas oo ay heli doonaan siyaasiyiin ay kala xushaan. Cidda kaliya ee faa’iido ka hesha beddelkiisuna waxay noqon doontaa Abiy Ahmed iyo xisbigiisa cusub ee PP oo adeegayaal dhago-fudud keensan doona magaalada Jigjiga.
Qalinka: Cabdiwahab Axmed Cabeeye
Tifaftiraha guud ee JigjigaOnline.com